भक्तपुरको मिठाइ इतिहास : जहाँ समोसालाई ‘योमरी’ सम्झन्थे!
अनिता श्रेष्ठ काठमाडौं - शनिबार, कात्तिक २९, २०७७
कुरो २०४८ सालतिरको हो, जतिबेला भक्तपुरका स्थानीयलाई न समोसा भनेको थाहा थियो न बर्फी र रसबरी।
थाहा हुनु पनि कसरी?
बजारमा स्थानीय मिठाइ लाखमरी, अनर्सा, फिनी, जेरी, खजुरी, लोट, हलुवा, स्वारी आदिमात्र प्रचलित थिए।
न अन्य ठाउँबाट निर्यात हुन्थ्यो, न स्थानीय अन्त घुम्न जान्थे।
त्यही साल ग्राहकका लागि नयाँ परिकारको स्वाद चखाउन विश्वराम लवजुले खोले ‘लवजु मिठाइ भण्डार’।
उनको पसलमा स्थानीय नेवारी मिठाइसँगै भारतीय स्वादका रसबरी, लालमोहन बेच्न राखिए।
मानिस नयाँखाले मिठाईदेख्दा छक्क पर्ने र के हो भनेर प्रश्न गर्ने गरेको अहिले पनि सम्झिन्छन् लवजु।
एकपटक त समोसालाई स्थानीयले ‘योमरी’ पनि भन्न भ्याए। योमरी नेवार समुदायले चामलको पिठो र चाकु वा खुवा हालेर बनाउने एक किसिमको मिठाइ हो।
सहरमा नयाँ चिज आउँदा मानिस अचम्म पर्ने गरेको र उक्त चिजलाई स्थानीय चिजसँग दाँज्ने गरेको उनी सम्झिन्छन्।
पुर्खौंदेखि दूध र खुवा बेच्ने लवजु परिवारले यसैलाई निरन्तरता दिन खोलेका थिए मिठाइ पसल।
‘हामी भक्तपुरदेखि काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा दूधको आपूर्ति गर्दै आएका थियौं। काठमाडौंको नाम चलेको पाँचतारे होटल याक एन्ड यतीमा पनि दूध पु-याउने गथ्र्यौं,’ उनी सम्झिन्छन्।
झन्डै पाँच वर्षजति भयो होला, भक्तपुर कमलविनायकमा मिठाइ पसलको संख्या वृद्धि भएको। विषेशगरी भारतीय मिठाइ पसल खुलेका।
चिटिक्क पारेर सजाइएका हुन्थे भारतीय मिठाइ पसल। तर, स्थानीय मिठाइ पसल भने सजावटभन्दा गुणस्तरमा जोड दिने गर्थे।
हिजोआज स्थानीय मिठाइ कम बिक्ने गरेको बताउँछन् लवजु। भारतबाट भित्रिएका दूध खुवाका मिठाइ मानिसले ज्यादै मन पराउने गरेका छन्।
‘स्थानीय मिठाइमा मैदा धेरै प्रयोग हुन्छ। अहिले मैदामिश्रित मिठाइको माग १० देखि १५ प्रतिशतमात्र छ,’ लवजुले भने, ‘पहिले चाडपर्वमा ३० देखि ४० किलो खुवाको मिठाइ बनाउँदा बाँकी रहन्थ्यो भने कति त खेर पनि जान्थ्यो। तर, आजभोलि भने ३ सय धार्नी खुवाका मिठाइ बिक्री हुने गरेको छ।’
उनको चिन्ता सधैं एउटै हुने गर्छ, त्यो हो– मिठाइको गुणस्तर।
चाडपर्वमा मिठाइ प्रयोग बढ्नु र व्यापारी बढ्नु स्वाभाविक भए पनि व्यापारका नाममा ठेलागाडामा मिठाइ बेच्नेका कारण वषौंदेखि चल्दै आएका पसलका ब्रान्ड र नाम पनि खराब हुने उनको गुनासो छ।
‘ठेलागाडामा मिठाइ बेच्न आउनेलाई न दर्ता गर्नुपर्छ न ग्राहकको गुनासो सुन्नुपर्छ,’ लवजु भन्छन्, ‘उनीहरूले नराम्रो मिठाइ बेचेका कारण ग्राहकले हाम्रा मिठाइ पनि किन्न हिच्किचाउँछन्।’
त्यस्तै, मिठाइ पसलमा नगरपालिका र प्रशासन कार्यालको महिनामा तीन पटकसम्म अनुगमन हुने गरेको छ। तर, खुला व्यापारीलाई कुनै कारबाही नभएको गुनासो गर्छन् उनी।
जाँच गर्दा कस्तो तेल प्रयोग गरिएको, रंग प्रयोग भए–नभएको, खाद्य सामग्री सबैको जाँच गरेपछि मात्र अनुमति दिइन्थ्यो।
कोरोना महामारीका समयमा चार महिना पूर्णरूपमा ‘लकडाउन’ गरिएको थियो। अन्य व्यवसायजस्तै मिठाइ व्यवसायमा पनि धेरै नै असर परेको लवजु बताउँछन्।
‘चार महिनासम्म स्थानीय सरकारले हामीलाई पसलै खोल्न दिएन। त्यसपछि अन्य पसल खुलाइए पनि मिठाइ पसल भने खोल्न दिइएन।’
उनले भारतीय मिठाइ पसल खोल्दा कोरोना नसर्ने तर स्थानीय दूध–खुवाले बनाएका मिठाइबाट कोरोना सर्छ भनेर व्यापार गर्न नदिएको भन्दै गुनासो पोखे।
‘सरकारले हामी स्थानीय र स्थानीय उत्पादनलाई कहिल्यै प्रथामिकता दिएन। महामारीको समयमा पनि हामीलाई यसरी नै भोकै राख्यो,’ उनले भने।
आठजना कर्मचारीलाई तलब दिएर व्यापार गर्नुपर्दा धेरै घाटा भएको उनी बताउँछन्।
‘धन्य, मैले आफ्नै घरमा पसल राखेको हुनाले कोठाभाडा जोगिएको छ। नत्र, ५० प्रतिशतभन्दा कम व्यापारले न परिवार न काम गर्ने कर्मचारी पाल्न सक्थेँ,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २९, २०७७